मन्त्रीहरुलाई सम्पत्ति कहाँबाट बर्सिन्छ ?
राजनीतिमा इच्छाशक्ति चाहिने रहेछ । मलेसियामा महाथिर महोम्मद चुनाव जितेर सरकार बनाएको महिनादिन भित्रै ५० खर्ब डलर कालोधन राष्ट्रियकरण गरिदिए । केही गर्छु भनेर आएका केपी ओली र उनको २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति हेर्नोस् त ? राजनीति गर्नेको कुन घैया बारी छ र तिनको सम्पत्ति फल्छ ? यो अचम्मको दृश्यले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ तर ओली मन्त्रिमण्डल अलिकति पनि लजाएको छैन । यी नेतालाई कहाँबाट आउँछ यतिका सम्पत्ति ? यिनको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुपर्दैन ?
धेरै मन्त्रीहरुले सम्पत्तिको दाइजो भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यतिका सुन सम्पत्ति दाइजो दिने तिनका माइतीमा सुनकुखुरी छ कि के हो ? तिनको हैसियत र यिनको श्रीसम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी हुनसक्छ । आखिर जनताले तिरेको कर र विदेशीले दिएको ऋण, दानदातव्य यिनैले खाने रहेछन् । र, देशका सूचना, सम्पदा विदेशीलाई दिएर खाने पनि यिनै रहेछन् । महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता नदिने नेताहरुले सुन र सम्पत्ति सबै श्रीमतीका नाममा पो राखेछन् । अरु त अरु, थोत्रो साइकल मन्त्री लालबाबुसमेत ५५ लाखे ।
पहिला पहिला माइतीले बाख्राको पाठी, कुखुरी, यस्तै यस्तै पेवा दिन्थे । यी मन्त्राणीहरुलाई त करोडौंको सम्पत्ति पेवा दिएका रहेछन् । सेयर, घरघढेरी, बैंक ब्यालेन्स, सुनचाँदी सबै दाइजोमा आएको रे । तन्नम माइतीले यतिका धन दाइजो दिएछन् कसरी, ल्याएछन् कहाँबाट ? दाइजो प्रथा भित्रभित्रै कसरी बढेको रहेछ, कसले बढाएको रहेछ । कानुन उल्लंघन गर्ने को रहेछ ? अव त खुलस्त भयो नि । के गर्ने दुई तिहाईको सरकार छ, यो सरकारलाई पञ्चखत माफ छ, कसले छानबिन गर्ने, कसले यिनलाई खरी घस्ने ?
खाँटी कुरो चप्पल पड्काउनेहरुले भ्रष्टाचार गरेरै यो सम्पत्ति थुपारेका हुन् । जनता गरीव हुँदैजाने, नेता धनी बन्दै । यसको छ्यानब्यान गर्न जरुरी छ ।